“En fin de compte, le vr… | mandimby maharo
“En fin de compte, le vr…
Posted on 24 May 2012 by Mandimby Maharo
“En fin de compte, le vrai dirigeant n’est pas celui qui crée le consensus mais celui qui le produit” _ Martin Luther King
Sarotra ny fiaraha-mitantana. Teny miverimberina ao ambavan’ireo mpanao politika io. Toa miaza fa tsy te handray andraikitra izy ireo fa mitady olana foana hanohizana ny tetezamita. Tsy ny fanekana sy ny fanaovana ny sonia tokoa anie no mamaha ny olana fa ny fampiharana izay voasoratra ao amin’ilay taratasy natao sonia e. Tsy ny fitenenana fa hamaha krizy no mampiroso ny asa fa ny fanekena fa efa ela loatra ny krizy ka mila vahana amin’ny asa mivaingana. Io na andininy iray monja aza no raketin’ny tondro-zotra ka ifanarahana fa tena ho atao dia mety. Ary na natao andininy 123 aza iny ka tsy ao ilay fandavan-tena dia tsy handeha io.
Maika hiroso amin’ny fifidianana, nefa ny fepetra entina hanaovana izany nodakadakana nandritra ny 3 taona. Ary raha izay namerimberenana izay tetika hanao fifidianana tsy iaraha,na manomana izay no nisaina dia efa tsy voaisa amin’ny ratsan-tanana. Fa ny hita mivainhgana aloha dia tsy ao ilay finiavana, ilay fanoloran-tena. Mbola ny kajy politika no manery, ka na ny hilaza fa hilatsaka na tsy hilatsaka aza mbola atao fangalam-piery satria mbola te hikajy aloha.
Mandritra izany dia mitady efa ho sarotra ihany koa ny fiarahana monina eto. Tsy vitan’izay nandova ny fizarazaraina napetrak’ireo mpanjanaka fa dia mbola namafisin’ny taranany ihany koa ankehitriny. Dia mba oviana re vao mba hanana fandavan-tena hahay hiara mitantana ireto mpanao politika, ka ho fitaratra ho an’ny fiarahana monina e?